युद्धविरामका लागि कोरोनाका चार शर्त ! - Nayabulanda.com
अरुण नेपाल १० बैशाख २०७७, बुधबार ०९:२३ 555 पटक हेरिएको
मानिस र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) वीचको विश्वयुद्ध चर्कदैं गएपछि मानिसले कोरोनासँग युद्धविराम गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । युद्धविराम गर्न कोरोनाले चार शर्त अघि सारेको छ । मानिस र कोरोनावीच प्रथम चरणमा सम्पन्न उक्त वार्ताको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुतत गरिएको छ :
मानिस : (परैबाट) नमस्कार, कोरोनाज्यू !
कोरोना : नमस्कार !
मानिस : अब युद्धविराम गरे कसो होला, कोरोनाज्यू ?
कोरोना : पहिला, युद्धविरामका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुहोस् न !
मानिस : के गर्दा वातावरण बन्छ हजुर ?
कोरोना : तपाईहरूले देखिराख्नुभएकै छ कि मैले कुनै पनि भेदभाव नगरी तपाइहरू सबैलाईं एकैखाले व्यवहार गरेको छु । त्यसरी नै तपाईंहरूले पनि एक अर्कामा कुनै भेदभाव गर्नुभएको छैन भन्ने अनुभुति हुनु नै त्यस्तो वातावरण बन्नु हो ।
मानिस : हामीले के नै त्यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेका छौं र हजुर ?
कोरोना : ए, अझै भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा नै पो महशुस भएको छैन ? यदि त्यसै हो भने त्यो कुरा अनुभुति नहुञ्जेल युद्धविरामका कुरै नगर्नुहोस् ।
मानिस : होइन हजुर त्यसो नभन्नुहोस् न ! हाम्रोमा त हाहाकार नै भैसक्यो ।
कोरोना : के हाहाकार भयो र ?
मानिस : हामीमध्ये कतिको जीवनलीला समाप्त भैसक्यो । कति भोकभोकै छौं ।
कोरोना : अँ, मैले विश्व भ्रमण नथालुञ्जेल चाहिँ कोही पनि मरेकै थिएनन् ? कोही पनि भोका थिएनन् ? मेरा कि तपाईहरूका कारणले धेरै मान्छे मरे ? मेरा कि तपाइहरूका कारण धेरै मान्छे भोका भए ? अझै यस्ता पूर्वाग्रही र झुठ कुरा गर्ने ? यस्ता झुठ कुरा गर्दा कसरी युद्धविरामको वातावरण बन्छ ? सबभन्दा पहिला कम्तीमा सत्य ओकल्न तयार हुनुहोस् । अनि युद्धविरामका कुरा गर्नुहोला । म अझै केहि मुलुकमा पुग्न बाँकी नै छ । त्यसपछि थप कुरा गरौंला ।
मानिस : होइन, होइन हजुर । फेरि त हजुरसँग सम्पर्क हुनै कठीन छ । बरू हजुरले भन्न खोजेका कुरा अलिक सुत्रबद्ध रूपमा भनिदिनु भए म मेरा साथीसँग कुरा गरेर युद्धविरामको वातावरण बनाउने थिएँ नि हजुर । बरू हाललाई हजुरले आराम गर्नु भएहुन्थ्यो । बाँकी मुलुकको भ्रमण पनि रद्द गरिदिनुभए हुन्थ्यो ।
कोरोना : म सुत्रबद्ध रूपमा केहि कुरा त बताउँला । तर तपाईहरू जे भन्नुहुन्छ, त्यसको ठीक उल्टो गर्नुहुन्छ । अनि म तपाईंहरूका कुरा कसरी पत्याँउ ?
मानिस : होइन, हजुर । अब हामीबाट त्यस्तो वेइमानी हुने छैन । हामीले धेरै चेतिसक्यौं । यो भन्दा अगाडि हामीले यो दुनियाँमा हजुर यति शसक्त हुनुहन्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेका रहेनछौं । हजुरले विश्व भ्रमण गर्न थालेपछि मात्र हामी झस्क्यौं । हजुर पनि यो दुनियाँमा यति शक्तिशाली हुनुहुँदोरहेछ भन्ने कुरा बल्लबल्ल थाहा पायौं । यो कुरा थाहा पाएपछि त अब यहाँका शर्त मान्न हामी तयार छौं, हजुर । अब हामीबाट त्यस्तो उल्टो काम कहिल्यै हुनेछैन, हजुर । बरू युद्धविराम गर्दा हामीले पालना गर्नुपर्ने शर्त यहाँले जसरि पनि बताइदिनुपर्यो, हजुर ।
कोरोना : मैले भनेका शर्त पूरा गर्न साँच्चै तयार हुनुहन्छ त ? कारणवश शर्त पूरा नभए फेरि के गर्ने ?
मानिस : पक्का कार्यान्वयन हुन्छ हजुर पक्का । कुनै फरक पर्ने छैन । फरक परे हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यहि गरे हुन्छ ।
कोरोना : ल । तपाईहरू साँच्चै भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो चरणमा म केहि शर्त राख्छु र ती शर्त पूरा हुने महशुस भएमा पुनः बाँकी शर्तका सम्बन्धमा थप कुरा गर्दै जाउँला । हुन्छ ?
मानिस : हुन्छ हजुर हुन्छ ।
कोरोना : त्यसो भए ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् । एक, अब आइन्दा तपाईंहरूमध्ये थोरैले भएभरको सम्पत्ति थुपारेर संसारका धेरै मानिस भोकभोकै मर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ ? अर्को बैठकमा तिथिमिति सहित उपस्थित हुनुपर्ने ।
दुई, संसारमा मानिस महिला र पुरूष गरी जम्मा दुई जात मात्र भएको सत्य स्वीकार गरी आइन्दा हामी यी दुई भन्दा फरक अरू रंग वा जातका नाममा झैझगडा गर्ने वा हेलाँहोचो गर्ने वा मारामार गर्ने छैनौं । महिला र पुरूषवीच समेत प्रकृतिले नै तोकिदिएका काम गर्ने भन्दा बाहेक अन्य विभेदजन्य व्यवहार गर्ने छैनौं भन्ने निर्णयको लिखित दस्तावेज आउँदो बैठकमा पेश गर्ने ।
तिन, मानिसका त बरू महिला र पुरूष गरी दुइ जात छन् । तर संसारमा अध्यात्मिक शक्तिका रूपमा ग्रहण गरिदै आएको एउटै मात्र इश्वर छन् भन्ने कुरा तपाईहरूलाई राम्ररी थाहा छ । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि तपाईहरू इश्वरलाई आफूखुशी कृष्ण वा क्रिश्चियन वा अल्लाह वा यस्तै अनेक नाम राख्दै तिनै नामका पछि दगुरेर एक अर्कालाई घृणा गरेको देख्दा मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ । संसारमा हजारौं भाषा भएकाले एउटै वस्तुका पनि भाषा अनुसार फरक फरक हजारौं नाम हुन सक्छन् । जस्तै तपाईहरू पानीलाई कोही वाटर भन्नुहुन्छ त कोही जल । यसरी एउटै वस्तुका पनि भाषा अनुसार विभिन्न नाम हुन्छन् भन्ने सत्य बुझीबुझी त्यस्तो बुझ पचाएर तपाईहरू अध्यात्मिक शक्तिको प्रतिक इश्वरलाई विभिन्न नाम दिदै त्यहि नामका पछाडि दौडेर एक अर्कालाई सिध्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ । अनि म एकछिन विश्व भ्रमणमा निस्कदा मैले नै मात्र तपाईहरूको अस्तित्व नामेट पारे झैं गरी मेरा बिरूद्धमा कोकोहोलो मच्चाउनुहुन्छ । अनि कसरी कुरा मिल्छ ? त्यसकारण अब तपाईहरूले धर्मका यो वा त्यो नाममा झगडा गर्ने काम तत्काल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता सहितको निर्णयको सक्कल प्रति नै अर्को बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मात्र तपाईहरूसँग थप कुरा गर्ने वातावरण बन्छ ।
चार, तपाईहरूको साझा घर पृथ्वीलोकमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्दै तपाईहरू संसारलाई नै प्रदुषित बनाउँदैहुनुहन्छ । मानिस बाहेक अन्य जीव जन्तु, वनस्पति आदिको संरक्षणका सम्बन्धमा त झन् तपाईहरु कति पनि सम्बेदनशील देखिनुहन्न । हेर्नोस् त, मेरै डरले भएपनि तपाईहरूले केहि समय विश्व ठप्प पार्दा संसारको वातावरण कति स्वच्छ र मनमोहक भएको छ ? केहि दिन वा केहि महिना त तपाईहरूले मलाई यसरी नै तह लगाउनु होला । तर यदि मैले बर्षैभरि वा त्यो भन्दा बढि विश्वभ्रमण गर्ने निर्णय गरें भने तपाईहरू कतिञ्जेल त्यसरी घरभित्रै थुनिएर बस्न सक्नुहुन्छ ? तपाईहरूमध्ये धेरैलाई तपाईका घरघरमा कसले आवश्यक खाद्यान्नको आपूर्ति गरिदिन्छ ? कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? त्यस्तो अवस्थामा तपाईको प्राण धान्ने खाद्यान्न उब्जाउन त त्यहि प्रकृतिमै शरण लिन जानु पर्ला नि, होइन र ? अनि तपाईले तपाईको अस्तित्व धान्ने प्रकृतिलाई त्यति धेरै प्रदुषित गर्न मिल्छ ? प्रकृतिका मुटु कलेजो नै निमोठनामठ पार्न मिल्छ ? के अब तपाईहरू प्रकृतिको त्यस्तो चरम दोहन रोक्न तयार हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने यस बारेमा निर्णय भएको निर्णय पुस्तिका समेत मलाई बुझाउनु होला । अनि वार्तामा बसौंला । फेरि एकचोटी कान खोलेर सुन्नुहोस् । यदि तपाईहरू साँच्चै युद्धविरामलाई अर्थपूर्ण र निर्णायक बनाउन चाहनुहुन्छ भने यी चार शर्त पूरा हुने प्रतिबद्धता सहित फोन गर्नुहोला । अनि युद्धविरामको मिति तय गरेर बाँकी कुरा गरौंला ।
मानिस : हवस् हजुर । म यहाँका यी चार शर्त साथीहरू समक्ष प्रस्तुत गरेर पुनः यहाँसँग सम्पर्क गर्नेछु । धन्यवाद् । नमस्कार ।
कोरोना : ल ल । म अलिक हतारमा पनि छु । अहिलेलाई बाई ।
(हाल विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा यो सामग्री काल्पनिक रुपमा तयार गरिएको हो ।)